I-hose ye-PVC yee-hose series-i-Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ndifuna bungakanani ubungakanani bePVC?
Eyona nto ibaluleke kakhulu xa usebenza Umbhobho wePVC kwaye izixhobo ngu nominal ubungakanani. 1 " kufanelekile izakulingana no 1 " umbhobhoNokuba yeyiphi na ishedyuli 40 okanye 80.
Ngaba kulungile ukusebenzisa ipayipi yePV kumanzi ashushu?
Owona mqobo uphambili kwi Umbhobho wePVC yinto yokuba ayinakuba njalo isetyenzisiwe nge amanzi ashushu izicelo. Xa kutyhilwe amanzi ashushu, PVC iya kuluka.
Ngaba i-PVC hose iguquguqukayo?
Xa uninzi lwabantu lucinga ngalo PVC, Bacinga ngemibhobho emhlophe engwevu nabayisebenzisa kwiinkqubo zabo zokufaka imibhobho yamanzi. Okwangoku PVC yinto ebhetyebhetye, kwaye inokuba njalo bhetyebhetye kunye nokuqina. Obu bude be Umbhobho wePVC oguqukayo ingakunika ukuguquguquka kokubaleka imigca apho imibhobho engqongqo ingayi kuhamba.
Ngaba i-PVC hose fuel resistant?
Ngaba unako PVC nezinye iiplastiki imibhobho isetyenziselwe ukubasa kunye irhasi? Ngamafutshane, impendulo nguhayi, abanako. ... Ngenxa yobume be PVC kunye nezinye iiplastikhi ngokunjalo, azikulungelanga ukuzisebenzisela irhasi yombane okanye iparafini. PVC kunye nezinye iiplastikhi zikhubazeka ngokulula kwindawo ezinobushushu obuphezulu, kwaye zinokuvuza okanye zidilike
Ngaba iintubi ziyitya iPVC eguquguqukayo?
Ayimelani nezinambuzane, ngakumbi, Iintubi yaziwa ukuba yitya yiyo. Uphando lubonakalisile I-PVC eguqukayo iyenza ungatsali Iintubi, nangona kunjalo ukuba i-pvc eguqukayo ibekwe phakathi kwe intubi indlwane kunye nendawo yokutya, banokuzama yitya indlela yabo ngayo